Zlatan, Dybala & Bruno Fernandes oo qeyb ka ah magacyada Shan ciyaaryahan uu la saxiixan karo Jose Mourinho – Gool FM
(London) 20 Nof 2019. Jose Mourinho ayaa loo magacaabay badelka Pochettino ee kooxda Tottenham Hotspur, wuxuuna durba isha ku heyn doonaa ciyaaryahano cusub si uu ula soo saxiixdo suuqa kala iibsiga ee soo socda.
Jose Mourinho ayaa markale ku soo laabtay liiska tababarayaasha horyaalka Premier League, kaddib markii uu noqday badelka Mauricio Pochettino oo laga ceyriyay shaqada tababarka ee kooxda Tottenham Hotspur.
Macalinka reer Argantina ayaa shalay oo Arbaco ah laga ceyriyay kooxda ka dhisan Waqooyiga magaalada London, sababa la xiriira hoos u dhac ku yimid natiijooyinka Spurs-ka ee kulamada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, taasoo ka dhigtay in Mourinho uu soo laabto kaddib mudo 11 bilood uu ka maqnaa saaxada tababarka.
Madaxa kooxda Tottenham ee Daniel Levy ayaa kaddb magacaabistiisa Jose Mourinho, wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah tababarayaasha ugu guulaha badan kubadda cagta.
Haddaba Jose Mourinho ayaa kaddib markii loo magacaabay macalinka cusub ee kooxda Tottenham Hotspur, waxay wararku sheegayaan inay u badan tahay inuu si xoogan u gali doono suuqa furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan.
Magacyada xiddigaha la filayo inuu isha ku heyn doono tababare Jose Mourinho ayaa waxaa ka mid ah, Nemanja Matic, Zlatan Ibrahimovic, Paulo Dybala, Bruno Fernandes iyo Nathan Ake.